Farmaajo oo loo sheegay in kumanaan Soomaali u dhimanayso CarovaVirus hadii aan degdeg looga hortagin! | SMC
Home WARARKA MAANTA Farmaajo oo loo sheegay in kumanaan Soomaali u dhimanayso CarovaVirus hadii aan...
Farmaajo oo loo sheegay in kumanaan Soomaali u dhimanayso CarovaVirus hadii aan degdeg looga hortagin!
Maalintii shalay ayaa ay ahayd markii Agaasimaha Guud ee Hay’adda Caafimaad Aduunka (WHO), Dr. Tedros Adhanom uu uga digay madaxda Afrika in ay sahladaan dhibaatada ku soo wajahan qaarada Afrika gaar ahaan wadamada ku yaalo Bariga Africa.
Baaaritaano kala duwan oo laga sameeyay wadamada Bariga Africa ayaa lagu sheegay in mudo ku siman sadax asbuuc uu si buxada ugu faafi doono curudkaan wadmada ku yaala Bariga Afrika. Waxaa si gaar ah looga hadlay Soomaaliya taas oo la sheegay in mudo ku siman afar asbuuc gudahooda uu cudurku ku dhici doono kumanaan Soomaali ah, gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalooyinka waawayn sida Baydhabo , Muqadisho, Gaalkacyo, Baladweyne , Jowhar, Boosaaso.
Iyada oo laga tusaale qaadanayo digniinta ka timid WHO ayaa maanta waxaa qadka taleefanka la iska arko kuwada hadlay madaxda wadamada ku bahoobay Urur Goboleedka IGAD. Wadamada oo intooda badan qaba hay’ado caafimada oo shaqeeya, ayaa soo bandhigay da’daaloolka iyo talaabooyinka ay ka qaadeen ka hortaga CaronaVirus.
Kulankii maanta ayaa Madaxwyne Farmaajo oo u muuqday in uusan fakar buuxa ka haysan dhibka ku soo wajahan ummadda Soomaaliya loo sheegay in Kumanaan Soomali ah u dhiman doonto cudurka CaronaVirus hadii ayan dowladiisa qaadin talaabooyin deg deg ah. Farmaajo ayaa isku dayay in u sheego madaxda kale in Soomaaliya uusan ka jirin Cudurkaas, waxa uuna tusaale u soo qaatay in dad yar laga helay. Waxa la weydiiyay imisa qof ayaa laga baaray cudurka, waxa uu sheegay in aan wali si rami ah loo bilaabin baaritaanka cudurka.
Madaxweynaha Uganda ayaa u sheegay Farmaajo in uu u baahan yahay in uu helo qubaro u sameeyso “data anaylisis” ama waxa loo yaqaano “Modal Data” taas oo qiyaas ka bixinayso d qaabka uu cudurka ugu faafayo Soomaaliya.
Halka madaxda kale ee ka soo qaybgashay kulanka ay la joogeen quburo caafimaad iyo madaxda hay’adaha caafimaad, Farmaajo kaligiii ayuu ahaa, isaga oo aan waxbadan kala socon xaalada cudurka iyo dhibaatada uu u keeni karo Soomaaliya.
Dhaqanka Farmaajo ee ku wajahan cudurka CaronaVirus ayaa lagu qiimayn karaa labo nooc: 1) in uu ogyahay dhibaatada ku soo wajahan shacabka Soomaaliyeed, raalina uu ka yahay in cudurkaas ku faafo dalka si aan doorasho uga dhicin Soomaaliya, dhibaatana ku habsato Soomaaliya iyo in 2) in aqoon daro u gaystay hadalkii uu maanta ka sheegay kulankii madaxda IGAD.
Si kastaaba ha ahaatee, waxaa lama huraan ah in shacabka Soomaaliyeed gaar Dowlad Goboleedyada ayan waxba ka sugin Dowlada Fedaraalka oo ay qaadaan talaabo kastaa oo lagu badbaadin karo shacabka Soomaaliyeed. Umadda Soomaaliyeed u diyaar garoobaan balaayada cudurka CaronVirus oo ku soo wajahan asbuucyada soo socda.
Previous articleDaawo Farmaajo oo ka qeyb-galay kulan deg deg ah oo ay yeesheen Madaxda IGAD
Next articleKhudbadaha musharixiinta Guddoonka Baarlamaanka KG oo la dhageystey